Xukuumaddu maxay ka tidhi in Ciidamo Jabuuti leedahay la wareegeen Magaalada Saylac? | Somaliland.Org
February 27, 2010	Hargeysa (Somaliland.Org)-Taliyaha Ciidamada Xeebaha galbeedka Somaliland Maxamed Cismaan Xudhuun, ayaa ka hadlay war ku saabsan Ciidan ka socda Dalka Jabuuti oo la sheegay in uu la wareegay Magaalada Saylac oo beri la filayo inay ka dhacdo Caleemo-saarka Ugaaska Beesha Ciisaha. Waxaanu sheegay in M/weyne Rayaale isaga u xilsaaray xaaladda amni ee deegaannadaas.
Warar sheegaya in Ciidamo ka socda Jamhuuriyadda Jabuuti oo la sheegay in ay sugayaan ammaanka Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo la filayo in uu ka qaybgalo Caleemo-saarka Ugaaska Ciisaha, ayaa isa-soo-tarayay. Hase ahaatee, Taliyaha Ciidamada Xeebaha ee gobollada galbeedka Maxamed Cismaan Xudhuun oo Wargeyska Ogaal Khadka Telefoonka kula xidhiidhay isaga oo ku sugan magaalada Geerisa ee gobolka Salal, ayaa sheegay in isaga Madaxweyne Rayaale u xil-saaray sugidda ammaanka Deegaankaas. Waxaanu sheegay in aanay jirin Ciidan Direys ku lebbisan oo ka socda Jabuuti deegaankaa jooga, marka laga reebo Ciidamada nabad-sugidda ee Dharcadda oo uu sheegay in aan la aqoonsan karin. “Waxa habeen dambe (caawa) soo hoyana (imanaya Saylac) Ugaaskii Ciisaha, kaas ayaanu tegaynaa oo aanu aroorta (maanta) u baxaynaa. Laakiin, weli Ciidan aan ahayn ka aan anigu Taliyaha ka ahay oo ka shaqaynayaa ma jiraan, mana imanayo. Way dhici kartaa inay jiraan kuwo Dharcad (Sirdoon) ah (oo Jabuuti ka socda), waayo lama kala yaqaano dadka Dharcadda ah, balse wax Direys Ciidan ku lebisani ma joogaan.” Ayuu yidhi Mr. Xudhuun oo u waramay Wargeyska Ogaal.
Mar aanu wax ka waydiinay in ay qorshaha ku jirto in Ciidamo ka socda Jabuuti ay yimaadaan Saylac iyo guud ahaan dhulka Somaliland iyo sida uu u arko haddiiba ay dhacdo, ayaa wuxuu ku jawaabay oo uu yidhi, “Xaqiiqatan waa wax aan la yeeli karin, anigaanba yeelayn inay yimaaddaan oo qofna ma yeelayo shaqadaada ha qabto, laymana soo sheegin. Sababtoo ah, Madaxweynahaa ila soo hadlay, aniga ayaanu ii xil saaray hawsha amniga ilaa ay dhammaanayso hawsha Caleemo-saarku. Waxaanan u xilsaaranahay Lawya-caddo ilaa Saylac oo ah inta la soo marayo.” Ayuu yidhi Maxamed, waxaanu intaa raaciyay oo uu yidhi, “Sababtoo ah, Wararku waxay sheegayaan in ilaa 1,500 oo Ergay oo ka kala socda Dalalka Jabuuti, Itoobiya iyo Somaliland ay ka qayb galayaan, waxaana ka qayb galaya Wasiiro Somaliland ka socda.”
Previous PostRa’iisal-Wasaarihii hore ee Soomaaliya oo dafiray waxay Somaliland qabsatayNext PostDawladda Soomaaliya oo Somaliland uga digay Weerarada iyo khataraha Kooxda Al-Shabaab	Blog